‘पोर्न भिडियो’ हेर्नुहुन्छ ! सावधान सर्वस्व गुम्न सक्छ « Janata Samachar
‘पोर्न भिडियो’ हेर्नुहुन्छ ! सावधान सर्वस्व गुम्न सक्छ
प्रकाशित मिति :9October, 2018 6:32 pm
काठमाडौं । पश्चिमी देशमा देखिएको अराजक प्रविधि भारतमा समेत भित्रिएको छ । भारतमा ‘सेक्सटार्सन’ भित्रिएको त्यहाँको प्रहरीले जनाएको छ । सञ्चारमाध्यमका अनुसार दुई महिना अगाडि मुम्बै प्रहरी कहाँ ‘सेक्सटासन’को बिषयलाई लिएर ५ उजुरी परेको छन् । आखिर के हुन्छ ‘सेक्सटासन’ ? कसरी मानिसलै ब्ल्याकमेल गर्छन् इन्टरनेटबाट तपाईलै बुझ्न जरुरी छ ।
‘सेक्सटासन’को सहायताले अपराधीले तपाईको ब्राउजिङ डाटा ह्याक गर्दछ । उक्त डाटाका आधारमा अपराधीले तपाईलाई ब्ल्याकमेल गर्दछ । जसले त्यस्तो साइट हेरेको हुन्छ उसको डिटियल ‘सेक्सटासन’का माध्यमबाट अपराधीले तपाईको डिटियल सार्वजनिक गर्ने धम्की दिन्छ । ‘सेक्सटार्सन’ एक साइवर क्राईम हो । द हिन्दुले लेखे अनुसार मुम्बै पुलिसमा परेको उजुरी कुनै मानिसले पोर्न साइट हेर्दा उसको डिटियल अपराधी कहाँ पुगेको हुन्छ ।
प्रहरीका अनुसार मुम्बैमा दुई महिला र एक पुरुष आफ्नो गोप्य कुरा कसैले सार्वजनिक गर्न खोजेको भन्दै उजुरी दिन आएका थिए । उनीहरुले पोर्न साइट हेरेको दुई दिनपछि मेल आयो जसमा उनीहरुको पुरै ब्राउजिङ डाटाको डिटियल र रकम माग गरिएको थियो ।
ढुङ्गाले हानेर हत्या
रुपन्देही । तिलोत्तमामा एक युवकको हत्या भएको छ । तिलोत्तमा नगरपालिका–७ दल्गाका २६ वर्षीय अशोक
मरेकाे भनिएकी युवती ८ वर्षपछि भेटिइन्
काठमाडौं । भारतको झारखंडकी एक युवती मरेको भनिएको ८ वर्षपछि फेला परेकी छन् । एक
सिसीटिभीको तार काट्दै २२ लाख लुटियो
भारत । विहारका अपराधीलाई प्रहरीको कुनै डर छैन । भागलपुरका डाँकाहरुले एकपटक फेरि प्रहरीलाई चुनौती
किशोरी करणी गर्ने पक्राउ
अछाम । महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेकै अवस्थामा एक किशोरीमाथि जबर्जस्ती करणी भएको छ
शेयर बजारः सामान्य अङ्कले बढ्यो